China Multi-inoshanda yekubika hari fekitori uye vagadziri | Meiling
Sterilization & kuchenesa
Yakawanda-inoshanda yekubika hari
1,20 Liter kugona, kufa-yakakandwa aruminiyamu nonstick pani inobviswa neye nhema isiri-tsvimbo yemafuta kupfeka. Basa rekugadzwa (30-720 mins); Yakapfava girazi muvharo, ine insulated mubato; PP chivharo pamwe Silicone rakavhara. Main muviri ine kudziyisa ndiro; Pani yekutsvaira, yekuipisa (Tritan zvinhu). Ndiwedzere kudziyisa hurongwa kunoita tembiricha akatsiga uye yunifomu. Uye pani yemagetsi yekumisa inomira kuenderera uchidziisa uye chengetedza tembiricha kana tembiricha yasvika pane yako, iyo inokubatsira kubika chikafu chakanaka zvirinani. Uye inogona kushandiswa sekudya kwemasikati, nyore kukurumidza.
Rated Voltage 220V 60Hz;
Net huremu 2.45kg / PC
Kuyera Chigadzirwa (L x W x H) mm 256x1 66x173 (mm)
Zvishongedzo dema rabha, tambo yemagetsi (0.9m)
Pot Zvinhu kufa-kukanda aruminiyamu ine nhema isiri-tsvimbo yemafuta kupfeka
Basa rekugadzwa 30-720 mins
1. 1.2L compact dhizaini
Iyo inokwana ndeye 1.20L die-cast aluminium ine nhema isiri-tsvimbo yemafuta yekupfeka; Basa rekugadzwa (30-720 mins); Yakapfava girazi muvharo, ine insulated mubato; PP chivharo nesilicone yekuisa chisimbiso. Main muviri ine kudziyisa ndiro; Pani yekutsvaira, yekuipisa (Tritan zvinhu).
2. Mabasa matanhatu ekubika
Iyo yemagetsi pani skillet rutsigiro yakakangwa, yakakangwa, hari inopisa, yakabikwa, yakanyoroveswa, yakasviba. Imwe multifunction yemagetsi skillet inogona panzvimbo yemhando nhanhatu dzekubika pani
3. Fast kupisa ndiro
Kurumidza 60 masekondi preheating thermally yakaenzana isina chiutsi, hapana chikonzero chekumirira kwenguva yakareba. Ndiwedzere kudziyisa hurongwa kunoita tembiricha akatsiga uye yunifomu. Uye pani yemagetsi yekumisa inomira kuenderera uchidziisa uye chengetedza tembiricha kana tembiricha yasvika pane yako, iyo inokubatsira kubika chikafu chakanaka zvirinani.
4. Panstick pani inobviswa
Iyo pani yemagetsi skillet ine yakachengeteka uye yepamusoro-tech yekupfeka, uye inogona kushandiswa kuchoto, moto. Zvinoenderana nemenyu yekuchinja mapani akasiyana kuti ubike chikafu chakasiyana zvirinani uye nekuchenesa zviri nyore.
5. Ergonomic dhizaini
Inoonekwa yekudzora pfundo. Zvakareruka kusarudza iyo yekubika basa sezvaunoda. Anotakurika zvishongedzo masikati bhokisi inogona kuburitswa. Yakapfava girazi muvharo neyakavharika mubato, muviri mukuru uine kudziyisa ndiro; Pani yekutsvaira, yekuipisa (Tritan zvinhu).
Pashure: Magetsi Lunch Bhokisi
Zvadaro: Inotakurika Juicer
Mini Steamer Pot
Inotakurika Kufamba Keturu
Magetsi Steam Lunch Bhokisi
Magetsi Lunch Bhokisi
1.6L Yakaderera Shuga Mupunga
Nezve Meiling / MAK
Guangdong Meiling Internet Technology Co, Ltd.
© Copyright - 2010-2023: All Rights Reserved.